Jinsiga Kordhinta Hormoonada alaabooyinka mashiinka ah ee loo yaqaan 'hormones' - Dufanka AASraw
/ Products / Galmada Horumarinta Gormoonnada
Hormoodka kor u kaca ee jinsiga ayaa ku dhacaya badeecooyinka dabiiciga ah iyo kiimikada Shirkadkayaga, waxaan si fudud u soo saari karnaa waxoogaa cayriin ah oo ka mid ah alaabooyinka sida caadiga ah loo arko ee suuqa.
Heerarka haweenka ee estrogen, progesterone, iyo testosterone ayaa si dabiici ah hoos ugu dhacaya da'da, gaar ahaan inta lagu jiro iyo ka dib dhalmada. Baro siyaabaha aad u ilaalin karto jinsigaada, xitaa heerarka hoormoonkaagu hoos buu u dhacaa. Iyo, ragga qaarkood, oo ay weheliyaan da ', kacsiga jinsiga ayaa hoos u dhacaya. Iyo, gaar ahaan, ragga qaarkiis waxaa ku jira dhibaatooyin aan caadi aheyn. Si aad u isticmaasho daawooyinka galmada ee saxda ah, ka caawi inay ku raaxaystaan ​​nolosha, ama nolol wanaagsan.
Qalal la'aantu (awood la'aanta) waa awood la'aanta ah in ay hesho oo ay sii haysato shirkad qallafsan oo ku filan jinsiga.
Dhibaatada kacsiga waqti ka waqti ma aha arrin walaac ah. Haddii dhibaatada erectile ay tahay arrin joogto ah, si kastaba ha ahaatee, waxay keeni kartaa walwal, waxay saameyn ku yeelataa isku kalsoonaantaada iyo inaad ku biirto dhibaatooyinka xiriirka. Dhibaatooyinka helitaanka ama ilaalinta koritaanka sidoo kale waxay noqon karaan calaamad muujinaysa xaalad caafimaad oo hoose oo u baahan daaweyn iyo halis saameyn leh cudurka wadnaha.
Daaweyntu waxay kuxirantahay sababta keentay.
Jimicsiga, gaar ahaan jimicsiga aerobobeed inta lagu jiro bartamaha nolosha ayaa waxtar u leh kahortagga ED; jimicsiga sida daaweyn ayaa lagu baarayaa. Si loo cabbo tubaakada sigaarka, joojinta joojinta ayaa muhiim ah.
Qalabka daaweynta ilkaha iyo qalabka xakamaynta afka ayaa ah daaweynaha ugu horeeya, oo ay ku xigto injirta guska, iyo galmada galmada.
Daawooyinka PDE5 ee sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) iyo tadalafil (Cialis) waa daawooyin dhakhtar qoray oo loo qaato afka.
Kareem isku darka ah alprostadil oo leh dhiirigeliye sii deynaya DDAIP ayaa Kanada laga aqbalay si ay u noqoto daaweyn ugu horeysa oo ah cillad aan caadi ahayn.
Mid ka mid ah daawooyinka soo socda ayaa laga yaabaa in lagu duro guska: papaverine, phentolamine, iyo prostaglandin E1.
Sildenafil / Sildenafil Citrate (viagra) waa daaweyn caadi ah ED. Waxay kaa caawineysaa inaad ku adkaato marka wakhtigu sax yahay. Waa inaadan ka tagin 6 illaa habeenbarka kaliya adoo qaadanaya.
Tadalafil / Cialis waa daawo jinsi oo wax ku ool ah si wax ku ool ah, qadar yar, waqti dheer oo dheer.
Xagga kuwa kale, Dapoxetine HCL ayaa la aaminsan yahay in ay ku caawiso ragga si ay u dheeraato muddada galmada, marka la isku daro isticmaalka cialis ama viagra.
Kadib qaadashada kiniin, qaar ka mid ah qaybaha firfircoon ee CIALIS waxay ku jirtaa jirkaaga muddo ka badan 2. Walxaha firfircooni wuu sii yaraanayaa haddii aad dhibaato ku qabto kelyahaaga ama beerkaaga, ama aad qaadato daawooyin kale.
Daawooyinka kale ma u saameeyaan CIALIS?
U sheeg bixiyahaaga daryeelka caafimaadka dhammaan daawooyinka aad qaadato, gaar ahaan:
daawooyinka loo yaqaan "Nitrates" kuwaas oo inta badan loo qoro xanuunka feedhaha
daawooyinka loo yaqaan 'stimulase cyclase stimulators' (guanlate cyclase stimulators) oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo dhiig-baxa dhiig-baxa iyo dhiig-dillaaca
Alfa-blockers inta badan ayaa loo qorey dhibaatooyinka qanjirka 'prostate'
daawooyinka cadaadiska dhiigga
daawooyinka HIV ama noocyada dawooyinka antifungal ee afka
qaar ka mid ah noocyada antibiotica sida cadithromycin, telithromycin, erythromycin (dhowr magacood ayaa jira, fadlan la xiriir bixiyahaaga daryeelkaaga caafimaad si aad u ogaatid inaad qaadatid dawadan)
daawooyinka kale ama daweynada ku-xumaada erectile (ED)
CIALIS waxaa sidoo kale lagu suuq geynaa ADCIRCA si loogu daweeyo sambabada sare ee sanbabada. Ha qaadan labadaba CIALIS iyo ADCIRCA labadaba. Ha qaadin sildenafil citrate leh CIALIS.
Muujisid 1-8 natiijada 12
Dapoxetine HCL budada
Budada JinYang Alkali (Jinyang Base)
Foostada Aceticholic Acid